विज्ञान प्रविधि Archives - Page6of 19 - Vishwa News
09-Jul-2020 | २५ असार २०७७, बिहीबार
कोभिड -१९ को उपचारमा अमेरिकामा उदायो नयाँ आशा
न्युयोर्क हरेक अंध्यारो पछी उज्यालो पक्का आउँछ अनी खराब समय सधैं रहदैन भने जस्तो अमेरिकामा अब बिस्तारै कोरोना भाईरसबाट बच्ने उपचार बिधी पहिल्याईदै छ।अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा ४ हजार जना कोभिडका बिरामीहरुलाई एन्टीमलेरियाको औषधी हाईड्रोक्सक्लोरोकुईन दिएर उपचार सुरु गरिएको राज्यका स्वास्थ अधिकारीहरुले
२४ चैत्र २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
एकैपटक करीव २० हजार जनामा कोरोना परीक्षणको तयारी
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा एकै पटक २० हजार व्यक्तिमा कोभिड १९ को परीक्षण गर्ने भएको छ । यो परीक्षण सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङमा गर्न लागिएको हो । सुदुरपश्चिममा समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आंशका सहित सरकारले र्‍यापिड टेष्टको तयारी थालेको हो
के टि बी रोगको भाइरस बिरुद्ध प्रयोग गरिने बि सि जी खोप लिनेलाई कोरोना लाग्दैन ?
न्यूयोर्क टि बी (ट्युबरक्लोसिस) रोग बिरुद्धको खोप अनिबार्य गरिएका देशहरुमा कोरोना भाईरसका कारण मृत्‍यु हुनेहरुको संख्या निक्कै कम देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । टि बि बिरुद्धको खोप अनिबार्य नगरिएका देशहरुमा कोरोनाको कारण मृत्‍यु हुनेको संख्या अधिक भएपनि यो खोप
२३ चैत्र २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
कोरोनाको खोप पत्ता लगाएको अमेरिकी डाक्टरको दावि कति सत्य ?
न्यूयोर्क । अमेरिकाको पिटसवर्ग मेडिकल सेन्टर युनिभर्सिटी (यूपीएमसी)का डाक्टरले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्धको सम्भावित खोप पत्ता लगाएको दावि गरेका छन् । यद्दपी यसलाई कुनै आधिकारिक निकायले पुष्टी भने गरेका छैनन् । डाक्टरहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै खोपको परिक्षण सफल
२२ चैत्र २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
अब चितवनमा पनि कोरोना परिक्षण
चितवन । अब चितवनमा समेत कोरोनाको परिक्षण सम्भव भएको छ । राष्ट्रिय पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा कोभिड १९ को नमूना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । यो प्रयोगशालाको काम आजबाट संचालनमा आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राविधिक टोली बिहीबार दिनभर
भारतमा ५ अप्रिलमा ब्लाकआउट, ९ मिनेट लाइट अफ गरिने
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोना संक्रमणविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ब्लाकआउट घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उक्त आह्वान गरेका हुन् । उनका अनुसार ५ अप्रिलका दिन रातको ९ बजे ९ मिनेटका लागि देशभर लाइट
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
अब कोरोनाको परिक्षण सात वटै प्रदेशबाट, नमुना काठमाडौं ल्याउन नपर्ने
काठमाडौं । नेपालमा अब कोरोनाको परिक्षण सातै वटै प्रदेशबाट हुने भएको छ । नमुना परिक्षण गर्न अब काठमाडौं आइरहनु पर्ने झण्झट हटेको छ । सरकारले (बिहीबार) देखि कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला देशका सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य तथा
२० चैत्र २०७६, बिहीबार विस्तृतमा »
न्युयोर्क कोरोना भाइरस संक्रमित तथा भाईरस संक्रमणको कारण हुने कोभिड -१९ को बिरामीको उपचार गर्ने निश्चित औषधि नबनेको कारण अहिले विश्व समुदाय आतंकित छ । झन्डै ५० हजार मानिसको ज्यान लिइसकेको भाइरस संक्रमणको जोखिममा लाखौं मानिस छन् । विश्वका शक्तिशाली
अमेरिकी कम्पनीले बनायो कोरोनाको नतिजा ५ मिनेटमै पत्ता लगाउने मेसिन
न्यूयोर्क । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण अब ५ मिनेटमै सम्भव हुने भएको छ । अमेरिकी कम्पनी एबोटले सबैभन्दा छिटो भाइरस परीक्षण गर्न सकिने प्रविधिको विकास गरेको दावि गरेको छ । यसले संक्रमितको छिटो पत्ता लाग्ने र फैलावट कम गर्न सहयोग
१६ चैत्र २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
कोरोनाबाट एकै दिन ३५ सयको मृत्यु, इटलीमा मर्नेको संख्या १० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । कोरोनाको कहर संसारभर जारी छ । यसले यूरोप र अमेरिकालाई यतिबेला सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शनिबार साँझसम्म विश्वभर यस भाइरसका कारण करीव ३१ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ । शनिबार मात्र कोरोना
उपत्यका बाहिर कोरोनाको परिक्षण बिस्तार गर्दै सरकार, मेडिकल किट लिन चीन गयो जहाज
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि कोरोनाको परिक्षण हुने गरी सेबा बिस्तार गरेको छ । धरानमा शनिबारबाटै सेवा बिस्तार गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब हेटौडा, पोखरा तथा नेपालगन्जमा समेत सेवा बिस्तारको
१५ चैत्र २०७६, शनिबार विस्तृतमा »
चैत महिनाको विद्यूत महसुलमा २० प्रतिशत छूट
काठमाडौं । सरकारले चैत महिनाका लागि विद्यूतका ग्राहकलाई छूट दिने भएको छ । यो छूट घरायसी प्रयोजनमा विद्यूत उपयोग गर्ने ग्राहकका लागि मात्र हो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार करीव ३८ लाख ग्राहक यसबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । १ सय
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार विस्तृतमा »
कुलमानको आह्वान, विजुली धेरै चलाउनुहोस, माग घटेको छ
काठमाडौं । देशब्यापी लकडाउन कारण अहिले सबै काम ठप्प छ । कलकारखाना बन्द भएका छन् । व्यापारिक क्षेत्र ठप्प छन् । सोहीकारण विजुलीको माग घटेको छ । लकडाउन घोषणा भएसँगै विद्युतको माग ह्वातै घटेको हो । बढी विद्युत् खपत गर्ने
१२ चैत्र २०७६, बुधबार विस्तृतमा »
भारत र चीनबाट सरकारले कोरोनाविरोधी स्वास्थ्य सामग्री मगायो
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संम्भावित संक्रमणविरुद्ध लड्न भारत र चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण मगाएको छ। चीन सरकारले नेपालसँग आवश्यक सामग्रीको सूचि नै मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले चीनबाट व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्री १ लाख ६० हजार थान मगाएको
१० चैत्र २०७६, सोमबार विस्तृतमा »
आजबाट अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द
काठमाडौं । नेपाल आउने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको उडान आजबाट बन्द हुँदैछ । सरकारले विदेशी यात्रुको आवतजावत रोक्ने उद्देश्यले आजबाट अन्तराष्ट्रिय उडान तथा अवतरण रोक्ने निर्णय गरेको छ । यसको कार्यान्वयन आजबाट हुने भएको छ । नेपालमा २९ कम्पनीका ६५ भन्दा
९ चैत्र २०७६, आईतवार विस्तृतमा »
आजबाट चार दिनसम्म लगातार वर्षा, सचेत रहन आह्वान
सिन्धुपाल्चोकमा युद्धस्तरमा उद्दारमा खटिन कांग्रेसको माग
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोको कहर, डेढ दर्जन वेपत्ता-२ को शव भेटियो
डब्लूएचओबाट औपचारिक रुपमै बाहिरियो अमेरिका
हतार-हतार संसद बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी दल
के नियन्त्रण उन्मुख छ नेपालमा कोरोना ? नयाँ संक्रमण र डिस्चार्ज बराबर
अनलाइनबाट मात्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय बिरुद्ध हार्भर्ड र एमआइटि सुप्रिम कोर्ट पुगे
सडकमा प्रधानमन्त्री पक्षधरको तमासा, कोरोना वेवास्ता गर्दै जयजयकार जुलुस
उपत्यकाका थप २३ जनामा कोरोना पुष्टि,पाँच जिल्लामा संक्रमण मुक्त
नेपालमा थप २ सय ५५ जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोनाले फलिफाप; बेलायतमा एक जोडीले कमाए ३ करोड पाउण्ड
रोटरी क्लव न्युयोर्क डिष्ट्रिक्ट ७२५५ को नयाँ अध्यक्षमा जनक भण्डारी
स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको ९७ औं जन्मजयन्ती अमेरिकामा मनाए
कानपुरमा गोली हानेर ८ प्रहरीको हत्या